होशीयार ! श्रीमान-श्रीमतीले कहिल्यै नगर्नुस् अरुसँग यी ५ कुरा” – Life Nepali
होशीयार ! श्रीमान-श्रीमतीले कहिल्यै नगर्नुस् अरुसँग यी ५ कुरा”
काठमाडौँ – श्रीमान् श्रीमती एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । रथको एक पांग्रा विग्रिए वा नभए रथ अगाडि जान सक्दैन त्यस्तै श्रीमान् श्रीमतीबीच समस्या उत्पन्न भयो भने रथ रुपी सम्बन्धपनि अघि बढ्न सक्दैन । त्यसमा समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । श्रीमान् श्रीमतीले वैवाहिक जीवन सन्तुलित र सधैं सुखी राख्नको लागि सचेत हुनुपर्छ । ‘बुढाबुढीको झ गडा परालको आगो’ भन्ने त लोक उक्ति नै छ । त्यसैले सामान्य समस्या पति पत्नीबीच पर्नु स्वभाविक नै हो ।
त्यस्ता समस्यालाई आपसी छलफल र कुराकानीबाट समाधान गर्न सकिन्छ । यदी सामान्य सम स्या पनि दुई जनाबाट बाहिर जान थाल्यो भने समस्याले थप जटिलता सिर्जना गर्छ । यस्तो व्यवहारले परिवार नै ध्वस्त हुने अवस्थामा समेत पुग्ने गरेको छ । पतिपत्नीबीचको समस्या वा झ गडालाई तेस्रो व्यक्तिसँग पुर्‍याउँदा दुई जनाबीचको दरार झन् बढ्ने भएका कारण यस्ता समस्यालाई सकेसम्म दुई जनाबीच नै समाधानको प्रयास गर्ने गर्नुहोस् ।
(१) नकारात्मक कुरा :- पति पत्नीको सम्बन्ध सधैं राम्रो मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन । यो दुई पक्षबीचको आपसी सहमतिको सम्बन्ध भएका कारण यो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकेसम्म सकारात्मक सोच राख्न आवश्यक हुन्छ । पति वा पत्नीको नकारात्मक मात्र कुराबारे साथीभाइसँग सेयर गर्नुभयो भने उनीहरुले पनि त्यसमा हो मिलाउने र दुई जनालाई मिलाउनु भन्दा एक पक्षलाई उचाल्ने, डि भोर्सका लागि उक्साउने आदी कार्य गर्न सक्छन् ।
(२) विवाह पूर्वको सम्बन्ध :-पति पत्निले विवाह भन्दा पहिलाको सम्बन्धबारेमा कुरा गर्दा धेरैमा समस्या पर्ने गरेको छ । केहीले त्यस्ता सम्बन्धलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता सम्बन्धहरुलाई सकेसम्म आफैंमा वा पति पत्नीबीचमा राख्ने गर्नुहोस् । साथीलाई भन्दा पनि त्यस्ता विषय अन्यत्रसम्म फैलने र रमाइलो रमाइलैमा साथी भाइले त्यस्ता विषयलाई उडाउने आदी गर्दा समस्याहरु उत्पन्न हुन जान्छ । त्यसैले पारिवारिक समस्या पर्न नदिन पति पत्नीबीच छलफल र समझदारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । दुई जनाबीच हरेक विषयमा छलफल, समस्याको सुझवुझ पूर्ण समाधान गर्न सकिएको खण्डमा वैवाहिक जीवनलाई राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ ।
(३) आर्थिक कुरा : – पारिवारिक कलहको अर्को कारण आर्थिक पक्ष हो । आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्था भएको खण्डमा यी समस्याहरु धेरै आउने गरेको पाइन्छ । पतिले पत्नीको र पत्नीले पतिको कमाइ कम छ, राम्रो गर्न सकेकै छैन भन्ने अरुलाई सुनाउन जरुरी छैन । किनकी समस्याहरु त पति पत्नी मिलेर नै समाधान गर्ने हो । आर्थिक रुपमा कमाइ गर्न सकेको छैन, पारिवारिक अवस्था यस्तो कमजोर छ लगायतका कुरा बाहिर गर्दा उनीहरुले तपाई माथि हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्छन् । एजेन्सी
(४) झैँ -झग’डा :– पति पत्नीबीच कहिलेकाहीँ झग डा हुन सक्छ । माथि नै भनिएको जस्तो पति पत्नीको झ गडा परालको आगो जस्तै हो । तर यही कुरा अर्को पक्षकहाँ पुग्दा त्यसले उग्र रुप लिने सम्भावना पनि हुन जान्छ । वा तेस्रो पक्षले त्यस्ता कुरामा खेल्ने सम्भावना पनि हुन जान्छ । त्यसैले आपसी छलफल कुराकानीमा समाधान गर्न जरुरी हुन्छ ।
(५) शयन कक्षका कुरा:- पति पत्नीले शयन कक्षा वा वेडरुमका कुरालाई सामान्यतया दुई जनामा सिमित राख्दा फाइदा पुग्छ । यस्ता विषयमा मानिसहरुको विशेष चासो रहन सक्छ । साथीभाइले निकै चासो पूर्वक सोधेको खण्डमा उत्साही हुँदै यस्ता कुराहरु खोल्दा ती विषय कुनै दिन मजाकको विषय बन्न पुग्न सक्छ । पति पत्नीबीच हुने यौ न स म्बन्ध, प्रकृया, लगायतका विषयमा अन्यसँग खुलेर कुरा गर्दा कहिलेकाही त्यसले नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ ।
Previous महिलाले पुरुषलाइ र पुरुषले महिलालाइ एकैछिनमा आकर्षण गर्ने एकदमै भर पर्दो ७ तरिका यस्ता छन :
Next स्त्रीको खु’ट्टाबाटै थाह पाउन सकिन्छ, सम्बन्धित पतिको भविष्य सम्पूर्ण रहस्य ! जान्नुहोस कसरी ?